‘आफ्नै पुस्तक उपहार दिएको छु’ – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७५ बैशाख २१ गते शुक्रबार ११:४४ मा प्रकाशित
कविता, नाटक, गीत, गजल, मुत्तक, उपन्यास, कथाजस्ता साहित्यका विविध विधामा पोख्त कृष्ण उदासी रंगकर्मी पनि हुन् । मोफसलमा रहेर राष्ट्रियस्तरमा स्थापित उदासी शिक्षक पेसामा आबद्व छन् । राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय पोखराका पूर्व प्राचार्य समेत रहेका उदासी हाल ‘नेशनल आर्ट्स स्कुल’ पोखराको निर्देशकका रुपमा कार्यरत छन् ।
उनका केही लिखित, निर्देशित केही चर्चित नाटक र कृतिहरु ‘अँध्यारो बस्ती, अन्तिम संहार, अश्रुज्वाला, अभ्यस्तर , अङ्गना, अन्तर्राष्ट्रिय रक्सीभट्टी, पुलिस र प्यास, मौसम हराएको देश, एक रुपैयाँ, बार्दलीको छेउबाट, सान्नानीको सन्ते राजा लगायत १०८ वटा नाटक प्रदर्शित छन् । यसबाहेक थुप्रै कविता, नाटक, गजल, उपन्यास लेखेका उदासीसँग गरिएको पुस्तक संवाद :
समय, समाज, जीवन र प्रकृति बोलेका किताब पढ्न मन पर्छ ।
अहिले पुष्कर विकको ‘मालचरी’ र राइगर्ड हेगर्डको ‘क्लियोपेट्रा’ पढ्दै छु ।
ज्ञान, चिन्तन, चेतना र विचार निर्माणका लागि जीवनमा पुस्तक पढ्नुको अनिवार्य महत्व हुन्छ ।
धेरै छन् । त्यसमध्ये केही पुस्तकहरुको नाम लिनुपर्दा मुनामदन, आमा, युवाहरूको गीत, लू आदि ।
मन नपरेको पनि होला नी ?
छन् तर नाम उल्लेख नगरुँ कि?
प्रायः आफ्नै पुस्तक उपहार दिएको छु ।
नेपालका उत्कृष्ट ५ लेखक को–को लाग्छन् तपाईंलाई ?
धेरै छन्, पाँच जना मात्रै छान्दा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण सम, गोपालप्रसाद रिमाल, कृष्ण सेन ईच्छुक, नयनराज पाण्डे । यिनीहरुले आ–आफ्नो स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण सहित किताब लेखेका छन् ।
करिब दश प्रतिशत मात्र ।
म बुझ्ने हुँदा घरमा पहिलो भेटेको किताब ‘स्वस्थानी’ हो । जुन किताब म कक्षा एकमा पढ्दा नै लुकीलुकी पढ्थें । जुन किताब जहिले नि पढ्न हुँदैन भन्ने धार्मिक मान्यता छ ।
नयाँ पुस्तालाई किताब तिर कसरी तान्ने ?
किताब पढ्ने पनि एउटा बानी हो । जब बानी पर्छ त्यो आधारभूत आवश्यकता जस्तै बन्छ । किताब पढ्ने बानीले ज्ञान, शिक्षा, चेतना र विचारसँगै अद्भूत आनन्द दिन्छ । यो बुझाउन सके युवाहरू किताब पढ्न तिर आकर्षित हुनेछन् ।